3 Goortuu boqor Herodos waxan maqlay, ayuu welwelay, isaga iyo reer Yeruusaalem oo dhan. 4 Oo intuu isu ururiyey wadaaddadii sare iyo culimmadii dadka oo dhan, ayuu weyddiiyey meeshii Masiixu ku dhalan lahaa.
2 Boqorrada dhulku col bay u taagan yihiin, Taliyayaashuna waxay u wada tashadaan Rabbiga iyo Masiixiisa, iyagoo leh, 3 Silsiladahooda aan gooyno Oo xadhkahoodana aan iska fogayno. 4 Kan samada fadhiyaa wuu qosli doonaa, Oo Sayidku iyaga wuu ku majaajiloon doonaa.….”.
Boqoradda aduunku waxay awood ayeey dhulka ku haystan… Waxayna ka diideen amarada Rabbiga iyo Ciise Masiix… Ilaaha samada fadhiya aad ayuu ula yaaba; Ilaahay wuu burburiya boqoradda isku daya inay kibran…. Waxanu leyahay , “ Waxan dejiyeey boqorka meesha Zion, buurta barakeysan…
Tags:AlmasiixCiise islaamCiise Masiix